Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Dalka Qatar oo booqasho ku yimid Muqdisho – AwKutub News
Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Dalka Qatar oo booqasho ku yimid Muqdisho
Leave a Comment on Wafdi ka socda Wasaaradda Gaashaandhigga Dalka Qatar oo booqasho ku yimid Muqdisho
Wafdi ka socda dowladda Qadar ayaa maanta kasoo degay garoonka Diyaaraddaha Aaden Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo socdaalkoodu ahaa mid aan la shaacin.
Waxaa Garoonka ku soo dhoweeyay wafdiga xubno ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga, iyadoo la sheegay in isla markiiba loo galbiyey xarunta Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya.
Wararka ayaa sheegay in wafdiggaan ka socda Wasaaradda Difaaca Qatar ay la kulmi doonaan madax ka tirsan dowladda Soomaaliya, iyadoo labada dal ay leeyihiin xiriir aad udhow.
Wafdiga ayaa la sheegay inay yihiin kuwo farsamo oo isugu jira Saraakiil iyo Agaasime Waaxeedyo ka tirsan Wasaaradda Difaaca dalka Qatar oo qiimeyn ku sameynaya baahida ciidamada Soomaaliya iyo wasaarada Gaashaandhigga.
Tags: Ciidamo Qatar Soomaaliya Wararka
Previous Entry Madaxweyne Farmaajo oo dhagax dhigay dhismaha iyo dib-u-dayactirka xarunta Tiyaatarka Qaranka
Next Entry Qaraxii Soobe ee 14-kii Oktoobar : ma hadho aana ka go’eynin qalbiyada umadda Soomaaliyeed